माधव नेपाललाई यी २२ सांसदले भने अब धेरै ल्याङल्याङ गरेर नबसाैं बारपार गरौं !
July 28, 2021 N88LeaveaComment on माधव नेपाललाई यी २२ सांसदले भने अब धेरै ल्याङल्याङ गरेर नबसाैं बारपार गरौं !
काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई उनीपक्षीय सांसदहरुले धेरै अलमलमा नबस्न सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका २२ सांसदहरुसँग बुधबार नेता नेपालले छलफल गरेका थिए । त्यस क्रममा सांसदहरुले अब धेरै अलमलमा बस्न नहुने सुझाव दिएका छन् । ‘वारपार गरौं । धेरै अलमल गरेर हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो’, […]
एमसीसी पास गर्ने चलखेलको गाइँगुँइ चलिरहेका बेला सुटुक्क दिल्लीतिर लागे विमलेन्द्र निधि !
July 28, 2021 N88LeaveaComment on एमसीसी पास गर्ने चलखेलको गाइँगुँइ चलिरहेका बेला सुटुक्क दिल्लीतिर लागे विमलेन्द्र निधि !
काठमाडाैं । नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को चर्चा चलिरहेकै बेला सत्तारुढ दल नेपाल काँग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पुगेका छन् । निधिको निजी सचिवालयले उनी भारतको गएको पुष्टि गरेको छ । ‘वहाँ पारिवारिक कामले भारत जानु भएको हो । आज बिहान काठमाडौँबाट नयाँ दिल्ली जाने कार्यक्रम तय थियो । तर, विमानमा […]
घर कता फर्काएर बनाउने, केके हुन् अशुभ ? यस्ताे छ वास्तुविद्काे सुझाव
July 28, 2021 N88LeaveaComment on घर कता फर्काएर बनाउने, केके हुन् अशुभ ? यस्ताे छ वास्तुविद्काे सुझाव
बासुदेव शास्त्री संस्कृतमा वस वसनीय धातुमा स्टोन प्रत्यय लगाएर वास्तुशास्त्र बन्छ । मानिसको स्वभाव र आवासीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित ज्ञानलाई वास्तु भनिन्छ । वास्तु विशाल शास्त्र हो । वास्तु शास्त्रभित्र ललितकला, चित्रकला, काष्ठकला, ताम्रकला, धातुकला लगायत १६ कलाहरु पर्छन् । हामीले ताम्रकला, चित्रकला, काष्ठकला देख्छौं । कला जोडिएका सबैको स्रोतग्रन्थ भनेको वास्तु नै हो । एक […]
माधव नजाँदा गठबन्धनको बालुवाटार बैठकमा चर्काचर्की, प्रधानमन्त्री देउवालाई भकुरे !
July 28, 2021 N88LeaveaComment on माधव नजाँदा गठबन्धनको बालुवाटार बैठकमा चर्काचर्की, प्रधानमन्त्री देउवालाई भकुरे !
काठमाडौं । बुधबार प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा चर्काचर्की भएको छ । नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पछिल्ला गतिविधिबारे आलोचना गरेका थिए । बैठकमा गठबन्धनमा रहेका दलसँग सल्लाह नगरी उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएकोमा प्रधानमन्त्री देउवामाथि नेताहरू खनिएपछि चर्काचर्की भएको बताइएको छ । नेताहरूले आलोचना गरेपछि देउवाले गल्ती स्वीकार गर्दै आइन्दा यस्तो गल्ति नगर्ने […]
सरकारमा सहभागी हुने विषयमा माधव नेपाल समूहले पठायाे यस्ताे सन्देश गठबन्धनमा मच्चियाे खैलाबैला
July 28, 2021 N88LeaveaComment on सरकारमा सहभागी हुने विषयमा माधव नेपाल समूहले पठायाे यस्ताे सन्देश गठबन्धनमा मच्चियाे खैलाबैला
काठमाडौं । नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष सरकारमा नजाने भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निवास बालुवाटारमा भएको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा नेपाल समुहले यस्तो जानकारी गराएको हो । बुधबार बिहान बालुवाटारमा बोलाइएको गठबन्धनको बैठकमा माधव नेपाल समुहको प्रतिनिधित्व गर्दै डा. विजय पौडेल सहभागी भएका थिए । उक्त बैठकमा आफूहरु सरकारमा नजाने पौडेलले जानकारी गराएका थिए […]
माधव नेपालको पार्टी एकताका लागि नयाँ तीन प्रस्ताव
July 28, 2021 N88LeaveaComment on माधव नेपालको पार्टी एकताका लागि नयाँ तीन प्रस्ताव
काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी एकताका लागि विश्वासको वातावरण अझै बनिनसकेको बताएका छन् । आफू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको तर, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संकटमा परेपछि एकताको हतारो गर्ने, तर फेरि अपमानयुक्त अभिव्यक्ति दिन नरोक्ने गरेको नेता नेपालले बताए । आफू निकट नेताहरुसँग नेता नेपालले अध्यक्ष ओलीको ‘आममाफी’ दिने अभिव्यक्ति जिब्रो […]
जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणीबाट महन्थ ठाकुरसहित यी १६ जनालाई हटाइँदै
July 28, 2021 N88LeaveaComment on जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणीबाट महन्थ ठाकुरसहित यी १६ जनालाई हटाइँदै
काठमाडाैं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले महन्थ ठाकुरसहित १६ जनालाई केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाट निकाल्ने तयारी गरेको छ। निर्वाचन आयोगमा मत विभाजन हुँदा अर्का अध्यक्ष ठाकुरको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सबैलाई केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले निष्कासन गर्न लागेको हो। केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य मोहम्मद इस्तियाक राई भन्छन्, “आज मध्याह्न १ बजे बस्ने बैठकले उहाँहरूको […]
प्रचण्डले फाइनल गरे माओवादीबाट मन्त्री बन्नेको नामावली, बालुवाटार पुग्यो लिष्ट !
July 28, 2021 N88LeaveaComment on प्रचण्डले फाइनल गरे माओवादीबाट मन्त्री बन्नेको नामावली, बालुवाटार पुग्यो लिष्ट !
काठमाडाैं । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्रिपरिषद्‌ विस्तार गर्न लागेका छन् । स्रोतका अनुसार देउवाले आज केही मन्त्री थप गर्न लागेका हुन् । माओवादी केन्द्र र समाजवादी पार्टीबाट केहि मन्त्रीहरूलाई आजै नियुक्तो गर्ने देउवाको तयारी छ । माओवादीबाट मन्त्री बन्नेको नामावली पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फाइनल गरेका छन् । लिष्ट बालुवाटार पुगिसकेको […]
July 28, 2021 N88LeaveaComment on टोकियो ओलम्पिकमा गौरिकाले बनाइन् राष्ट्रिय कीर्तिमान
काठमाडौं । जापानमा जारी टोकियो ओलम्पिकमा नेपालकी पौडीवाच गौरिका सिंहले राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी छिन् । टोकियो एक्वेटिक सेन्टरमा बुधबार भएको स्पर्धामा गौरिकाले महिलाको १ सय मिटर फ्रिस्टाइल तर्फ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएका हुन् । हिट चरणमा गौरिकाले १.००.११ सेकेन्डको समय निकाल्दै राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी हुन् । हिट १ मा रहेकी गौरिका आफ्नो हिटमा तेस्रो स्थानमा रहिन् । […]
एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती कदम भन्दै देउवा प्रचण्डलाई भीम रावलले दिए चेतावनी !
July 28, 2021 July 28, 2021 N88LeaveaComment on एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती कदम भन्दै देउवा प्रचण्डलाई भीम रावलले दिए चेतावनी !
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले मेलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गर्नु राष्ट्रघाती हुने बताएका छन् । बुधबार ट्वीटरमा एक ट्वीट गर्दै नेता रावलले नेपालको संविधान, कानून, राष्ट्रिय हित र स्वाधीनता विपरीतका प्रावधान नहटाई सम्झौता अनुमोदन गर्नु राष्ट्रघाती काम हुने बताएका हुन् । उनले लेखेकाछन्, ‘नेपालको संविधान,कानून,राष्ट्रिय हित र स्वाधीनता विपरीतका प्रावधान नहटाई […]
किन हटाए महेश बस्नेतले भाई–बुहारीलाई बधाई दिएको तस्बिर, यस्ताे छ भित्री कहानी ! September 26, 2021
मैले गरेकाे संसद विघटन ठीक थियाे : अध्यक्ष ओली September 26, 2021
एमालेमा सात उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव, को–को हुन्छन् प्रतिनिधि ? September 26, 2021
केन्द्रीय कमिटि बैठकमै खाए केपी ओलीले यस्ताे ‘बाचा कसम’, भीम रावल खुशीले गदगद September 26, 2021
आगामी निर्वाचनमा गोकर्ण बिष्टसँग चुनाव लड्ने रामकुमारी झाँक्रीकाे घाेषणा ! September 26, 2021